इन्डोनेसियाले किन सर्दैछ राजधानी ? यस्तो रहेछ कारण ! - ramechhapkhabar.com
इन्डोनेसियाले अहिलेको व्यस्त राजधानी जर्कातालाई बोरिनो टापुतर्फ सारेको छ । अहिलेको राजधानी जाकार्ताबाट १३ सय किलोमिटर टाढा रहेको कलिमन्थन प्रान्तको बोर्नियो द्विपमा नयाँ राजधानी बनाउन लागेको हो । राजधानी सार्नेसम्बन्धि विधेयक त्यहाँको संसदले सोमबार पारित गरेको छ ।
नयाँ राजधानीको नाम नुसन्तारा राख्ने निर्णय पनि संसदले गरेको छ । नुसन्ताराको अर्थ द्विपसमूह हो । राष्ट्रपति जोको विदोदोले केही वर्षअघि नै राजधानी सार्ने घोषणा गरेका थिए् ।
अहिलेको राजधानी सहरको जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ । पानी प्रदुषित छ । राजधानी सार्ने कार्यका लागि मात्र सरकारले ३३ अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । यसका लागि ९ देखि १५ लाख मानिसको आवासका लागि ३० हजारदेखि ४० हजार हेक्टर भूमि आवश्यक पर्नेछ । राजधानी स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउने इन्डोनेसिया मात्र पहिलो देश होइन । विश्वका अन्य देश पनि छन, जसले ढिलो चाडो अहिले भइरहेको राजधानी परिवर्तन गर्दैछन् ।